Waxaa laga helay dayacanka cusub ee Apple, markan waxaa laga helay iMessage | Waxaan ka socdaa mac
Runtu waxay tahay inaysan u noqon sanad wanaagsan Apple, haddii aan ku qiimeyno dhanka amniga. Waxaa laga yaabaa in shuruudaha suuqa si loo helo nidaam hawlgal oo cusub oo diyaar ah sannad kasta ay qaadanayaan dhibkooda. Ilaa hadda, khaladaadkan caadiga ah ee noocyada cusub, haddii ay saameyn ku yeelan lahaayeen, waxay la xiriireen cayayaanka shaqo maalmeedka. Si kastaba ha noqotee, In muddo ah hadda, dhibaatooyinka amniga ayaa sii kordhaya.
Munaasabadan, nuglaanta ayaa dhici karta markaan SMS ka dirno arjiga iMessage, adoo adeegsanaya iPhone-keena ahaan diraa ahaan, maadaama qof uu noo soo diri karo SMS. Codka dhawaaqa digniinta waxaa sameeya isticmaalaha Khaos Tian. Maalmo ka hor, waxay ogaatay u nuglaanshaha saameynaya HomeKit oo Apple ayaa xaqiijisay cillada oo ay u gudubtay hagaajinta. Munaasabadaas, wuxuu markii hore ka cawday wadahadal la'aanta kuwa mas'uulka ka ah Apple, markii uu la xiriiray raadinta.
Munaasabaddan, qaladku wuxuu soo baxayaa buugga isku xidha aqoonsiga isticmaale ee macruufka. Waxaan uga wada hadalnay qodobkaan, maaddaama isticmaaleyaal fara badan oo aan ka mid ahay, u diraan farriimo SMS ah oo loo maro Mac-ga. Khaos tian taas wuu ogaaday Hackers wuxuu badali karaa qofkaan wuxuuna u diri karaa SMS qof kale asaga oo matalaya, kan dambe wuxuu u maleynayaa in qofka loo soo diray uu yahay soo diraha asalka ah.
In kasta oo nidaamku diyaar u yahay in la ogaado isku dhaca xisaabaadka iCloud ee soo dejinaya farriinta ka socota Mac ilaa iPhone-ka, khalkhal gelin ayaa isla farriintan oo wada jir ah u diri karta tilmaam gaar ah, taas oo noo oggolaanaysa inaan dirno fariin la sheegay iyada oo aan dhex dhexaadin laga helin.
Waan daganaan karnaa waqtigan, maxaa yeelay ereyada qofka soo ogaaday fashilka, Apple ayaa ku saxay cayayaankaas waqtiga rikoorka. Soo-saaraha fashilka ayaa shirkadda ku wargaliyay bishii Diseembar 15 iyo 16, qaladkan waxaa la saxay December 20. Mar labaad, Apple way jawaab celisaa, waa arrin aan si wanaagsan u qiimeyno. Daahfureha fashilka ayaa galay saxaafadda, markii uu arkay in Apple aysan soo sheegin wax ku saabsan daahfurkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waxaa laga helay dayacanka cusub ee Apple, markan waxaa laga helay iMessage
HomePod Ma Xakameyn Doono Suuqa Suugaanta Caqliyeed, Daraasad La Helay